Gore inotaura nezvekuchinja kweMidhiya nzvimbo | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 28, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ruth Holladay's Blog nhasi anongedzera an chinyorwa pane hurukuro naAl Gore uye anobvunza maonero ake kune vezvenhau. Kunyanya, iye anobvunzurudza anobvunza Gore nezve centralization yenhau, kungave nemakambani kana nehurumende (pasirese). Gore inoti:
Democracy inyaya yekukurukurirana, uye rakakosha basa rezvenhau kufambisa iyo nhaurirano yerusununguko. Iye zvino hurukuro yacho yanyanya kudzorwa, yakanyanya kuve yepakati. - Al Gore
Wow. Kwete kuva fan weGore, ndiri kushamisika chaizvo uye kutendeseka ndichifadzwa neshoko rake pano. Ndiri mumwe weavo varume vanotenda zvechokwadi kuti vezvenhau anoita edza kukanganisa mamiriro edu ezvematongerwo enyika.
Usandibata zvisirizvo… handifunge kuti vezvenhau iboka remapapiro eruboshwe-parunhare dzakavanzika vachiedza kudzinga maRepublican, ndinongofunga kuti vanhu vazhinji mune vezvenhau uye varaidzo vane hupenyu hwakasiyana kupfuura vamwe vedu. Nekuda kweizvozvo, maonero avo epasi anowanzo kuve akasiyana. Pamusoro pezvo, chokwadi chekuti ivo vakadzidza chaizvo uye vari pachiremera chakasimba, vane munhu anodheerera-pulpiti yekumhanyisa pfungwa dzevanhu.
Kubloga neInternet kuri kuchinja iyo nzvimbo. Mushure mekunyorera kumapepanhau e2 kweanopfuura makore gumi, ini chokwadi handichasimudzazve. Ndakaverenga zvese zvangu zvepamhepo, uye ndikaverenga blogosphere maitiro kune iyo nhau. Kazhinji kazhinji kwete, ini ndiri kutanga kuona dzimwe nhau dzakatorwa nemabloggi kupfuura nemapepanhau. Ini ndinofunga chimwe chezvikonzero ndechekuti blogging inobvisa iyo 'kusefa' kweshoko.
Rute Blog muenzaniso wakanaka weizvi. Rute aburitswa kubva muzvisungo zvemupepeti uye bhurogu rake riri kupwanya nzira yaro kuenda kumberi kwenzvimbo yekublogi yeIndiana. Ndinochida. Mushure mekuverenga zvinyorwa zveRuth kwemakore, ini handina kuzoona kuda uye marimi mumeseji yake kudzamara aenda pamudyandigere ndokutanga kublogi. Ruth akafanana nehando yakatiza shopu yechina! Ini ndinogona kusawirirana nemeseji yake dzimwe nguva, asi handigone kumirira kuti ndiverenge yake inotevera kutumira.
Tariro yangu ndeyekuti Internet icharamba ichiva nzira nyowani yeku "kufambisa iyo hurukuro yedemokrasi". Ndinovimba inopa megaphone kune vasina kutaura munyika medu uye pano chaipo munharaunda medu. Mashoko ari papeji ane simba zvechokwadi… kunyanya kana asingadzorwe.
Rarama kwenguva refu wakasununguka kutaura!
Bhizinesi Svondo Online Poll: Ndeipi yako yaunofarira Blog?